Dibiga iyo Caana Booraha! – Bashiir M. Xersi
Dibiga iyo Caana Booraha!
Posted on 13 Jun 2014 by Bashiir M. Xersi	Posted in Qoraallo
Maanta waa Jimce iyo jalbeebsi. In kasta oo aan galbeed iyo goob Muslinku u yaqaan “DHUL GAALO” joogo, haddana, marka aan jaanis, fursad iyo u helo waqti bajiinada ayaad u dadaalaa, aan hadba si u qaato, aan se ugu jeclahay marka aan kaligay jalbeebsanayo, ama aan luga baxsanayo. Talyaaniga yaa dhaha; “Meglio soli che male accompagnati” oo ah; “Kali ayaa ka roon lammaane laqdabo!“.
Waa halkii ninku ka yiriye: “Sagaaro ima garatee!” Widaaygii shalay galab i weydiinayey “Caawa yaad tahay?” Waa kan haddana, mar kale weydiimahiisii igula soo laabtay.
Anoo jalbeebsigaygii caadiga ahaa ku jira, ayaa waxaa i soo maray saaxiibkaygii, oo meel uu u degdegayey ma qaane, int markii hore xoog iyo xuf igu gudbay, ka dib igu soo laabtay, sidii qof iga arkay qadaadka dambe oo kale.
Salaan iyo bariidin ka dib, wuxuu igu yiri; “Kalinnimo goorma ayaad ka baxaysaa?!” Saan ku iri; “Adi kuuma taale, danta aad iigu soo leexatay ka hadal, kuna gaabso, oo ha u soo gudbin waxa aan ahay iyo sida ay tahay inaan noqdo!”.
Inta qoslay sida caadada u ah, ayuu igu yiri; “Haa, waa halkaagiiye, baal aan tayda u gudbo, iga saxnide, Dibiga iyo Caana Booraha, kee ku haysataa caawa?!” Anoo la yaabban waxa Dibi iyo Caano isu keenay, haddana, Booro ah, ayaan ku iri; “Ha ii danbeeyo Dibiga iyo Caano Boorehee, horta adigu miyaadan aqoon in si fur caddi ah loo hadlo?”.
Markaa ayuu la soo baaday; “Hayaay, war galabta waad kalaamaysaa, ee saaxiibow, hadalkii reer baadiyaha oo waaweyn aad igula hadlowsaa, bal iga aayari, igana yaryaree adoo raalli ah!”
Inta ku qosol ayaan iri; “Hadalka mugga iyo miidda leh dadka ku hadla Badow iyo Baaddiye ayaad u taqaan malaha, haddaad MIYI dhihi lahayd, dood mangal ah ayey noqon lahayd, balse, hadda taada hantaatac ka soo qabee, aan ku weydiiyo; “Dibiga iyo Caano Booraha maxaa isu keenay?” Ma reer magaalka iyo ilbaxa ayaa DIBIGA ka lista CAANO waliba BOORO ah?!”.
Markaa buu igu yiri; “Horta markii Dooro loo heeso maxaad Digaagta ugu heestaa?” “Oo Digaagta iyo Dooradu ma kala duwan yihiin” ayaan ku iri. Saa inta wajiga ii duubay, sidii inuu iga carooday oo kale igu yiri; “Adiga Bashiirow, bahasha dhanka ay ka dhawdahay ka soo qabo, oo qodqodka iyo naga daa baarbaarka, laga fiicane!”.
Saa waxaan ku iri: “Anigu waxaan maqli jiray “Hebel marka Geela loo heeso ayuu Goroyo u hoosaa!” Nimanka dhahana waa kuwa aad badawda u taqaan iyo reer baadiyaha, haddaad se i dhihi lahayd: “Hebel marka Dooro loo heeso ayuu Diiran u heesaa!” waan kaa qaadan lahaa, ee isku day inaad ii sheegto faraqa u dhexeeya iyo waxa ay ku kala duwan yihiin DOORO iyo DIGAAG?!”.
“Fadlad Bashiir, taa dib ha iigu celin adoo raalli ah” ayuu igu yiri. “Anna waa ballan taa, ha ka baqan inay dib u soo laabato” ayaan ku iri. “Ee adna ii faahfaahi Dibiga iy Caanaha booraha meesha ay iska galaan?” ayaan u sii raacshay.
Markaa buu yiri; “Horta mid aan kugu jeclahay marka hore aan kuu sheegee, waa afgarad jacaylkaaga, oo runtii aan aad kuugu qaddariyo mar walba. Haddaan se kuu macneeyo waxa isu keenay labadaa eray, waxaan ka baqaa inaad qosol dartii iga orodddo”
“Maya, marna kaama carari doonee, bal hore u gal iba bixinta labada eray” inta neef xooggan jiiday, ayuu yiri; “Caawa waxaa ciyaaraha Isbayn iyo Holand” qosol yarna dhag ka siiyey, ayuu sii raacshay; “Wali ciyaarihii ayaan kaa dabada wadaa”.
“Haa.” Baan iri. Uguna daray; “Dibiga waxaa laga wadaa maada Isbayn ciyaaraha caynkaa ah ay caan ku yihiin, halka Caanaha Booraha laga wado Holand madaama ay caan ku tahay wax soo saaarka CAANAHA BOORAHA, saw saa ma ahan?”.
“Haa. Halkan waa haleeshay, oo fadhigan iyo layrtan kaagama darin”. Markaa baan ku iri; “Neecow qaadashadu waa qayb ka mid ah caafimaadka, hadday nadiif tahayna kumaba sii jirto.”
Ka dib ayuu inta goorsheegta fiirshay, oo madaxa gacanta saartay igu yiri; “Alla waan daahay, waxaan ka baqayaa in caawa FISAHA la ii diido, ee iga tag waa i daahisaye!” Iskuna daray fara filiq iyo ruclayn.
Anoo sii eegaya ayaan is weydiiyey, waxa uu uga jeeday FIISAHA. Haddana, waxaan isku qanciyey inaan isaga dib u weydiin doona, marka aan dib u kulanno, saa waa ta la yiriye; “Jinni ninkii keenaa baxshee!“. Anna waxaan iska sii watay jalbeebsigaygii, bajiinadaydii, neecowsigaygii iyo fadhigaygii.
4 thoughts on “Dibiga iyo Caana Booraha!”
Pingback: Dibiga iyo Caana Booraha! | WARAR SUGAN XAQIIQ AH AAN FAAFREBNEYN
Pingback: Baastada iyo Bataatiga keebaa la cunaa?! | HOYGA FAAQIDAADDAA & FALANQAYNTA AAN FAAFREEBNAYN